(XOG) MW Farmaajo oo ogolaaday in Ciidamada laga Saaro Siyaasada - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (XOG) MW Farmaajo oo ogolaaday in Ciidamada laga Saaro Siyaasada
Shabakada Warbaahinta RC ayaa ogaatay in Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo uu ogolaaday in ciidamada laga saaro siyaasada , halka ay horay latiliyaashiisa u sheegen hadii uu doonayo inuu kursiga kusoo noqdo uu isticmaalo Ciidamada & Hantida qaranka si loogu laaluusho odoyaasha dhaqanka.
Culeesyo Siyaasadeed oo dibada ugu yimid Madaxweyne Farmaajo ayaa ogolaaday in laga wadahadalo sida amniga doorashada loosugi lahaa loogana gudbi lahaa caqabada hada ku horgudbin in la qabto doorasho la iskula qanacsan yahay.
Beesha Caalamka oo ay hoggaamineyso Mareykanka ayaa ku qasbay Madaxweyne Farmaajo inuu danta dalka utanaasulo iskana daayo damaca shaqsiga ah isla markaasna ay soomaaliya hore ugu socoto wadada hormarka oo sanadihii u danbeeyay ku talaabsatay.
Dowlada Turkiga ayaa iyada saameenteeda siyaasadeed hoos u dhac weyn ku yimid marka loofiriyo xaalada uu hada dalka Soomaaliya ku sugan yahay, Turkiga oo lo arkayay wadan galaangal ku leh dalka isla markaasna xal u keeni karaa ismari waaga siyaasadeed ayaa kusoo koobmay fikrad u janjeertay dhinaca dowlada Qatar oo iyada xulufo la ah Madaxda hada waqtigeedu dhamaaday.
Turkiga ayaa xiriir aad u adag kala dhaxeeya Qatar 4 sano u danbeesana goaamanka Turkiga ee ku saabsan Soomaaliya waxaa laga goyn naayay Doha oo iyada ah Maskaxda iskaashiga Ethiopia , Eritrea & Soomaaliya si halkaas ay uga dhismaan dowlado kaligii talis ah , uyadoo aaminsan sida kaliya ay ku guran karto qeyraadka Soomaaliya ay tahay in dalka gacan bir ah lagu qabto.